‘मसँग पढेका कति साथी अझै जागिर खोज्दैछन्, गरी खान के को लाज !’ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
‘मसँग पढेका कति साथी अझै जागिर खोज्दैछन्, गरी खान के को लाज !’
असार ४, २०७९ शनिबार १३:४२:१६ | वैद्यनाथ पाैडेल
भक्तपुरको सृजना नगर बस्दै आउनुभएकी दोलखाकी ३० वर्षीया मुना श्रेष्ठले सफा टेम्पो चलाउन थालेको १२ वर्ष भयो । १२ कक्षासम्म पढ्नुभएकी मुनालाई आफ्ना साथीभाइ, इष्टमित्र कसैले टेम्पो चलाएको देख्ला र केही भन्ला भन्ने कुनै अप्ठ्यारो छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मसँग पढेका कतिपय अझै जागिर खोज्दैछन् । पढेर मात्रै मान्छेले काम नै पाएका छैनन् । काम गरेर खान मलाई कुनै लाज पनि छैन अप्ठेरो पनि छैन ।’
बिहान पुरानो बानेश्वर ग्यारेजबाट टेम्पो लिएर निस्केपछि उहाँको कहाँ खाने, के गर्ने भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो छैन । अनामनगर, पुरानो बानेश्वर, गौशाला रुटमा टेम्पो चलाउने उहाँको दैनिकी बिहान ७ बजे सुरु भएर बेलुका पनि ७ बजेतिर नै टुङ्गिन्छ ।
उहाँको बिहानको खाना खाने कुनै निश्चित समय छैन । समय हेरेर भन्दा पनि रोक्न अलि उपयुक्त ठाउँ लागे त्यहीँ खानुहुन्छ । तर, उहाँको खाना खाने ठाउँ भनेको प्रायः पुरानो बानेश्वर नै हो । श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘ठाउँ नभएर बाटोमै रोकेर खाने हो । कहिले खान खाएर आउँदा ट्राफिकले व्हिल लक लाइसक्या हुन्छ के गर्नु ।’
पेट्रोलको यो महँगीबाट जोगिँदै आउनुभएकी उहाँ टेम्पो ग्यारेजमा चार्जमा राखेर कोठा जानुहुन्छ । टेम्पो रातभरि चार्ज हुन्छ । चार्ज गरेको पाँच सय रुपैयाँ लाग्छ । टेम्पोले पनि रातभरि आराम पाउँछ अनि उहाँले पनि ।
चालकहरूको समस्या भनेकै बिसौनी नहुनु हो । कहाँ रोक्ने, के गर्ने भन्ने कुनै ठेगान छैन । पहिले–पहिले सुन्धारामा रोक्न दिए पनि अहिले बसपार्कमा काठमाण्डौ महानगरपालिकाले 'भ्यु टावर' बनाउन थालेपछि कुन गाडी कहाँ रोक्ने भन्ने टुङ्गो छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बसपार्क ओर्लिने मान्छेलाई न्यु प्लाजा पुर्‍याइदिएर त भएन । अनि यस्तैमा रोक्यो भनेर ट्राफिकले चिट काट्ने धेरै भैराछ अहिले ।’
उहाँको अहिलेको बिसौनी भनेको महाङ्काल मन्दिरको आडमा हो । त्यहाँ पनि रोकिनेभन्दा पनि अर्को टेम्पो आएपछि हिँडिहाल्नुपर्छ । ‘उता पुरानो बानेश्वरको अवस्था पनि यस्तै हो’, मुना भन्नुहुन्छ ।
जेसीआई नेपाल नामक संस्थाले महिलाहरूलाई निःशुल्क टेम्पो चालक तालिम दिएका बेला उहाँले टेम्पो चलाउन सिक्नुभएको हो । त्यस बेला लाइसेन्स लिन पनि खासै अप्ठेरो थिएन । मुना भन्नुहुन्छ, ‘अहिले त एक वर्षमा खुल्ने । छ/सात महिनामा खुल्ने । लिखित दिन पनि झ्याउ छ । त्यस बेला लाइसेन्स लिन गाह्रो थिएन । अहिले धेरै झन्झट छ । त्यो बेला आज फेल भए भोलि फेरि ट्रायल दिन पाइन्थ्यो । कुर्नु पर्थेन ।’
दिउँसो चिया पानी खान मन लागे पनि पिसाब फेर्न समस्या हुने कारणले पनि उहाँ पानी खानमा त्यति जोड दिनुहुन्न । ‘शौचालयको अभाव नै छ । ठाउँ–ठाउँमा सरकारले व्यवस्था गरे राम्रो हुन्थ्यो’, महानगरको नयाँ नेतृत्वप्रति आशावादी हुँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘केही गर्नुहोला । तर, हाम्रो त गाडी रोक्ने ठाउँ नै हुँदैन कहाँ जाने र !’
विवाहित मुनाले एसएलसी दिएपछि २०६७ सालदेखि नै टेम्पो चलाउन थाल्नुभएको हो । उहाँका श्रीमान् नेपाली सेनामा कार्यरत हुनुहुन्छ । अनि टेम्पो चलाएकोमा श्रीमानको केही गुनासो छ कि भन्दा मुना भन्नुहुन्छ, ‘उहाँको सहयोग छ । काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ।’
उहाँले टेम्पो १५ लाख रुपैयाँमा किन्नुभएको हो । जसमा अग्रिम भुक्तानी भने पाँच लाख गर्नुभएको हो । मुहारमा खुसी अनि गर्वको भावक साथ मुना भन्नुहुन्छ, ‘धेरै तिरिसकेँ । अब केही बाँकी छ । बिस्तारै तिरिन्छ ।’
June 18, 2022, 9:54 p.m.
नेपाल मा केही गरिखान पनि गाह्रै छ । यो बैनी ले नहुने काम गरेकै होइननी ! आफुले जानेको-सकेको काम गरि खायकि मा, मलाइ त एक्दमै खुशी लाग्छ । तर पार्किङ र खाने-पिउने र दिशा-पिसाब को कुरा ले अल्लि दुख लाग्यो । हाम्रो देश मा मानव अधिकार भन्ने कुरो, कुन चरा को नाम हो, थाहै छैन र भय पनि नभय जस्तो गर्नी अनि एस्सो कता बाट पोइसो आउँछ, तेतै लागि पर्ने त होनि ! बज्जिया हरु ले महिनावरि तलब र भत्ता पाउदा पनि एति साह्रो लोभी-पापी ! जेहोस, यो बैनी लाई धेरै२ शुभकामना छ । ढुक्क ले गरिखाने हो बैनी ! बिग स्याबास ।